Shina Slurry Suction Hose Famokarana sy Orinasa | Zebung
ZEBUNG Rubber Dredging Hoses dia tanjona namboarina tamin'ny fepetra takian'ny mpanjifanay manokana. Izahay dia eo amin'ny toerana ahafahana manangana haben'ny hosotra manomboka amin'ny ID 100 mm ka hatramin'ny ID 2200 mm. Ny mpamoron-tsainay dia hisafidy ireo fitaovana mety indrindra amin'ny vokatra marobe azo ampiasaina hanatontosana ny fepetra takiana amin'ny serivisy sy ny fangatahana takian'ny mpanjifanay, izany hoe ny fanoherana, ny fanerena, ny tanjaky ny tanjaka, ny fahaizan'ny miondrika ary ny masontsivana hafa.
Amin'ny ankapobeny ny ZEBUNG Rubber Dredging Hoses dia tsy misy atiny anatiny izay azo ahitsy mba hahafeno ny fepetra takiana amin'ny mpanelanelana entina. Ny sosona famantarana ny akanjo dia azo ampiharina amin'ny sisin'ny fantsom-pifandraisana izay mampita haino aman-jery malemy.
Ny fantsom-panafody mifono vy dia ampiasaina amin'ny tsipika fampirimana, sahaza ny fitaterana zavatra maranitra, lehibe sy mavesatra toa ny haran-dranomasina, grit ary ny toedan'ny toetr'andro. Miaraka amin'ny metaly fanoherana an-trano, ny sosona anatiny dia manana fahaiza-manao tsara amin'ny fanoherana sy ny fanoherana.
Ny famaritana dia azo alaina amin'ny alain'ny mpanjifa.
Diameter anatiny hatramin'ny 1300mm, ny halavany ary ny elanelan'ny tsindry.
Ny hatevin'ny rindrina dia toy ny 15mm ka hatramin'ny 100mm.
Mahazaka-abrasion sy miondrika - mahatohitra.
Mety ny mametraka azy, mora ampiasaina ary azo antoka.
Zoro miasa: 0 ° ka 45 °
mari-pana miasa: -20 ° C ka 50 ° C
Tube Diameter: 200mm-1100mm
Savaivony Flange: 340mm-1550mm
Ny hatevin'ny flange: 25mm-65mm
Ny hatevin'ny rindrina anaty: 12mm-45mm (azo namboarina)
Hole amin'ny flange: 8-36
Savaivony lavaka: 22-36mm
Ny iraka ataontsika
Miezaka ny ho solosaina sy mpampita herinaratra tsara indrindra eran'izao tontolo izao izahay, mba tsy hihoatra ny fenitry ny indostria ny vokatray; fa koa mihoatra ny takian'ny mpanjifanay.
habe ID WP halavan'ny
8inch 200mm 15bar ~ 20bar 11.8m
10inch 250mm 15bar ~ 20bar 11.8m
12inch 300mm 15bar ~ 20bar 11.8m
16inch 400mm 15bar ~ 20bar 11.8m
20inch 500mm 15bar ~ 20bar 11.8m
24inch 600mm 15bar ~ 20bar 11.8m
26inch 650mm 15bar ~ 20bar 11.8m
30inch 750mm 15bar ~ 20bar 11.8m
32inch 800mm 15bar ~ 20bar 11.8m
34inch 850mm 15bar ~ 20bar 11.8m
NAOTY: ID900mm & 1200mm, ny masontsivana hafa dia araka ny fepetra takinao
Previous: Tube mitsingevana mitsingevana
Manaraka: Air Tube
Selan'ny fantsom-panafahana slurry
Suction Ciment Slurry Water Tube
Manaova fantsom-pandrefesana fantsom-bozaka manohitra